Umshini Wecnc Wokusika Ihobbycarbon China Manufacturers & Suppliers & Factory
Umshini Wecnc Wokusika Ihobbycarbon - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 21 ye-Umshini Wecnc Wokusika Ihobbycarbon)
I-AntiStatic Heat Insulation Carbon fiber sheet cnc ukusika
I-AntiStatic Heat Insulation Carbon fiber sheet cnc ukusika kweRC racing fpv Mayelana ne-Full Carbon Fib Sheet, inamandla futhi ilula. Amashidi we-Carbon fiber angasetjenziselwa ukumiselela noma ukufaka esikhundleni se-aluminium noma amapuleti wensimbi ebangeni elihlukahlukene lamaphrojekthi. Izici zabo eziphakeme...
Umshini we-Algorum anodised Colourful anodised onekhala ngesiko
Umshini we-Algorum anodised Colourful anodised onekhala ngesiko Isikulufo se-Hobbycarbon M3 7075 se-Aluminium sithandwa kakhulu ngenxa yesisindo saso esikhanyayo, Amandla aphezulu nemibala emihle ethandekayo emakethe. Nayi inkinobho yesikrini se-aluminium, ungabheka izithombe. Futhi sinemibala ehlukahlukene...
Umshini we-7075 Aluminium Socket Cap Screws Machine Isikulufa luhlobo lwe-fastener, ngandlela thile efana nebhulothi, ngokuvamile elenziwe ngensimbi (njenge-Aluminium, Insimbi Engagqwali, Insimbi, i-Nylon). Izikulufo zisetshenziselwa ukubopha izinto zokwakha ngokumba ngaphakathi nangokuthi ziguqulwe zibe yinto lapho...
Amashidi we-3k egcwele we-Carbon Fibre wokusika
Amashidi we-3k egcwele we-Carbon Fibre wokusika Mayelana nokwakheka kweshidi le-2mm carbon fiber sheet elinqunyelwe usayizi Diy, lingenziwa kungxubevange ye-carbon fiber noma ingilazi eyingqayizivele enobuso bekhabhoni fiber, ukuqina kusukela ku-0mmmm kuye ku-50mm, ubukhulu nosayizi obekiwe. Iminyaka yamuva, ishidi...
Ukusika Umshini we-CNC kwe-Carbon Fibeta Sheet
Ishidi le-3K Carbon Fibre Liyathengiswa Sisekela ishidi le-carbon fiber eliphelele, ishidi le-carbon ingilazi, i-G10 Glass Fiber Sheet, ishidi lekhabhoni yemibala, zonke izingqimba ze-carbon 3k sheet, i-quasi-isotropic carbon sheet. Sine- Carbon Sheets eminingi Egcwele esitokisini, sisekela insiza ye- CNC Machine...
Inkonzo yokusika Umshini Wekhabhoni yeCarbon Fibre
Inkonzo yokusika Umshini Wekhabhoni yeCarbon Fibre Amapayipi e-Carbon fiber asetshenziswa kabanzi ezimbonini. Futhi sinokuhlangenwe nakho okucebile kwe-cnc carbon fiber amapuleti ukusika. Amashidi engilazi e-Carbon kanye namashidi we-G10 ayatholakala. Futhi ukubekezelela kuzoba ± 0.2mm. Sicela usithumele ukudweba...
IHobbycarbon Aluminium countersunk washer ye-hexacopter
IHobbycarbon Aluminium countersunk washer ye-hexacopter I-Hobbycarbon Red anodised Aluminium Countersunk Washer yenziwa nge-aluminium noma i-aluminium alloy inikeza impahla elula kakhulu futhi imelana nokugqwala okuningi kune-washers yensimbi ekhanyayo. I-Aluminium cone Washer isebenza ngendlela efanayo ne-washer...
IHobbycarbon Aluminium countersunk washer ye-quadcopter
IHobbycarbon Aluminium countersunk washer ye-quadcopter I-Hobbycarbon M5 pink Aluminium Countersunk Washer yenziwa nge-aluminium noma i-aluminium alloy inikeza impahla elula kakhulu futhi imelana nokugqwala okuningi kune-washers yensimbi ekhanyayo. I-Aluminium Countersunk Washer isebenza ngendlela efanayo ne-washer...
Amafreyimu we-X DIY wokusika ama-Carbon Fiber Sheets
Amafreyimu we-X DIY wokusika ama-Carbon Fiber Sheets Amafreyimu we-X ozimele we-DIY wokusika i-Carbon Fiber Sheets angasebenzisa ngokugcwele amandla we-carbon fiber kanye ne-modulus ye-elastic, ekwakhiweni kungasusa i-carbon fiber unidirectional Indwangu ye-resin yokwelapha isiteji, ukusetshenziswa kokusebenza...
Umshini Wecnc Wokusika Ihobbycarbon Umshini weCnc wokusika iHobbycarbon Umshini weCnc wokusika i-Carbon Fibre Umshini Wokusakaza Umshini Wokusika amaplanethi weCarbon Fibre I-M3 Hex Aluminium Standoff kusuka eHobbycarbon Amashidi Wokuhlobisa I-Carbon Glass Umshini weCnc weCarbon Fibre